Ciidamada Itoobiya oo Xabsiga dhigay Mas’uul Caan ah K/galbeed oo qorshe halis ah lagu helay | Nabadqaad Online
Ciidamada Itoobiya oo Xabsiga dhigay Mas’uul Caan ah K/galbeed oo qorshe halis ah lagu helay
Wararka ka imaanaya deegaanka Goof-gaduud Shabeelow ee Gobolka Baay ayaa ku waramaya in Ciidmada Amisom gaar ahaan kuwa Dowladda Ethopia in ay xabsiga dhigeen Gudoomiyaha Deegaankaas Xasan Xuseen Wardheer iyo ku-xigeenkiisa oo lagu magacaabo C/qaadir aadan Nageeye.
Mas’uuliyiintaan ayaa la xaqiijiyay in Ciidamada Ethopia gaar ahaan kuwa Ethopia In ay kala baxeen hoygooda, waxaana lagu eedeeyay in ay lunsadeen raashin gargaar ah oo loogu talagalay dadka deegaankaas ku nool.
Mas’uul ka Tirsan Maamulka deegaanka Goof-gaduud Shabeelow ee Gobolka Baay ayaa sheegay in Gudoomiyaha Degmada Xasan Xuseen Wardheer iyo ku-xigeenkiisa oo lagu magacaabo C/qaadir aadan Nageeye in ay lunsadeen deeq dawo ah oo loogu talagalay in lagula tacaalo dadka uu soo ritay Cudurka Shuban biyoodka ee deegaankaas ku nool.
Dhanka kale Waxaa la xaqiijiyay in mas’uuliyaantaan loo qaaday dhanka Magaalada Baydhabo ee Gobolka Baay si halkas dacwadooda loogu qaado, madaama lagu eedeeyay in ay lunsadeen gargaar shacabka loogu talagalay.
Arintaan ayaan kusoo beegmaysa xili dhawaan Mas’uuliyiin ka Tirsan maamulka koonfur galbeed Soomaliya lagu xiray arin tanoo kala ah kadib markii ay lunsadeen gargaar loogu talagalay shacabka Gobolka shabeelaha Hoose.